Aluminium Iwindi Screen - China Hebei Samsung Metal Wire Mesh
Aluminium iwindi screen senziwa al-mg ingxubevange ngezintambo ukwelukwa plain. Aluminium Wire Mesh uwela baba izigaba ezimbili: Aluminium-magnesium alloy Wire Mesh futhi emsulwa aluminium Wire Mesh, nokwelukiweyo nge eceleni aluminium ingxubevange wire futhi emsulwa aluminium wire. Umbala omiyane sesikrini Al: elikhanyayo Isiliva noma ngamalahle. Aluminium Ingxubevange Insect Screening kuyabiza ngaphezu fiberglass Mesh kodwa eliqinile le okuningi. Aluminium Ukuhlolwa kunzima futhi iqine, ngokuvamile ngo 18 x 16 anezikhala, 0,011 ububanzi ukuboniswa, ofanele ...
Aluminium iwindi screen senziwa al-mg ingxubevange ngezintambo ukwelukwa plain.
Aluminium Wire Mesh uwela baba izigaba ezimbili: Aluminium-magnesium alloy Wire Mesh futhi emsulwa aluminium Wire Mesh , nokwelukiweyo nge eceleni aluminium ingxubevange wire futhi emsulwa aluminium wire.
Umiyane sesikrini Al Color: elikhanyayo Isiliva noma ngamalahle.
Aluminium Ingxubevange Insect Screening kuyabiza ngaphezu fiberglass Mesh kodwa eliqinile le okuningi.
Aluminium Ukuhlolwa kunzima futhi iqine, ngokuvamile ngo 18 x 16 anezikhala, 0,011 ububanzi Ukuhlolwa, efanelekayo umnyango futhi iwindi izicelo eziningi. Aluminium iwindi screen ngeke nokugqwala noma isikhutha. Elinikelwe imiqulu noma Imi izingcezu.
Anezikhala Insect has isisindo ukukhanya, ezinhle ukugqwala ukumelana nokugqwala ukumelana
Isicelo: Njengoba isinambuzane Ukuhlolwa noma umthunzi ngokumelene izimpukane omiyane, Ukuvikelwa imishini, ukupholisa impahla kanye amasignali kokuthola.
Siphinde ukunikezela isinambuzane anezikhala izinhlelo, okuyinto lenzelwa kwamafasitela neminyango, kanye ephelele angasetshenziswa ekhaya nasezimbonini ibhizinisi.
Kulula yini ukufaka anezikhala isinambuzane?
anezikhala Insect Kulula kakhulu ukufaka. Zonke izinhlobo yethu kungenziwa wasika nge sikelo eqinile, bese umane staple noma ethe njo endaweni.
Kuyoze kube isinambuzane anezikhala eside?
Isilinganiso sobude bokuphila anezikhala isinambuzane kuzoncika ezisetshenziswa, futhi kuba kangaki kuncike ukuwohloka kwamangqamuzana. Kwamanetha kakhulu kanzima egqoke Sidayisa wukuthi eyinsimbi futhi lokhu litholakala noma insimbi engagqwali noma aluminium.
Zethu fiberglass kanye PVC camera anezikhala steel izindlela eshibhile, kodwa ngenxa yalokho kukhona obucayi xaxa futhi kumele sisetshenziswe kuphela endlini. Nokho, yethu isilwane anezikhala Sinemandla futsi Yenziwe polyester letinalokubalulekile inayiloni.
Uyini umehluko phakathi landiswa futhi nokwelukiweyo isinambuzane anezikhala ?
Impela wamane, kwamanetha enwetshiwe bunamandla futhi igcina ezakheke uma egoba, kuyilapho kwamanetha nokwelukiweyo ilula kakhulu ukusika futhi bend aphume ukuma.
Ngingalutholaphi ukuthenga isinambuzane anezikhala?
Uma ungathanda usizo ngokuthenga kwakho sicela unganqikazi usifonele ku 0086-311-69013206 noma uxhumane nathi nge -imeyili noma ku-Internet.
Previous: Chain Xhumanisa Fence
Olandelayo: Lashukumisa ashiselwe gabion Mesh
PVC Camera ashiselwe Wire Mesh